စက်နှေးနေလိုကူးညီကြဘာအုန် — MYSTERY ZILLION
March 2008 edited February 2009 in Help Desk
ကျွန်တော်စက်က refresh လုပ်ဖို့right click နိပ်လိုက်တာတော်တော်စောင့်ရတယ် cpu 2.4, memory 1 , hardisk 140 တောင်ရှိ တာဘယ်လိုကြောင့်နှေးနေမှန်းကိုမသိဘူးကူညီကြဘာအုန်:77:
Right Click on My COmputer >> Click on Advanced >> Click on Settings under Performance >>> Click on Advanced >>> Click on Change under Virtual Memory >> Select Drive C >>> Choose Custom size >>> Enter Intial size recommended below (If ur RAM is 1GB, it can be set around 1150MB) >>> Enter2x Initial size in Maximum size >>> Click on Set >> Then click on OK >>>> Click on OK >>> then Click on OK.
ကူးညီဘာအုန်မယ်ကွယ် (စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ... )
ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဖို့ အရင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ (ပါဏာတိပါတာ မဖြစ်ပါဘူး)
ဆီးယူ(see you) မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ ... တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ
tayzarwinn wrote: »
အင်း ၁၄၀ ပဲဆိုတော့ အသစ်၀ယ်သင့်ပြီ.. စတာပါ ) Window မချတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ....
မချတာကြာရင် စက်က လေးလာတတ်ပါတယ် ... Virus ရှိလို့တော့ မထင်ပေါင်
All programs ---Accessories----System tools----Disk Defragmenter ကနေ Analyze လုပ်ကြည့် ပြီး လိုအပ်ရင် Disks(C;D;E;F...)တွေကို Defragment လုပ်ပေးပါ ...Button လေးတွေကို Click ပေးရုံပါပဲ... Files space error တွေများလာလို့ Window လေးလာတာ ဖြစ်မှာပါ ...Window မချပဲ သုံးတာကြာရင်လည်း အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်....တစ်ခုခု ဖြစ်တိုင်း Virus မဟုတ်တာကို သိစေချင်ပါတယ်...ပျော်ရွှင်ပါစေ :103:
flame wrote: »
All programs ---Accessories----System tools----Disk Defragmenter ကနေ Analyze လုပ်ကြည့် ပြီး လိုအပ်ရင် Disks(C;D;E;F...)တွေကို Defragment လုပ်ပေးပါ ...Button လေးတွေကို Click ပေးရုံပါပဲ... Files space error တွေများလာလို့ Window လေးလာတာ ဖြစ်မှာပါ ...Window မချပဲ သုံးတာကြာရင်လည်း အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်....တစ်ခုခု ဖြစ်တိုင်း Virus မဟုတ်တာကို သိစေချင်ပါတယ်...ပျော်ရွှင်ပါစေ :103:[/quote window ကအသစ်ဘဲရှိသေးတယ် ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာရဲ့hardisk က ၂နှစ်လုံးတက်ထားတာ ၁တစ်လုံးကအသစ်ဘဲရှိသေတယ်
အဲဒိအသစ်ထဲမျာwindow တင်ထားတာ hardisk အသစ်က 80G အဟောင်းက 60G
Video Graphic card မကောင်းရင်ရော်စက်လေးတက်လာ
window ကအသစ်ဘဲရှိသေးတယ် ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာရဲ့hardisk က ၂နှစ်လုံးတက်ထားတာ ၁တစ်လုံးကအသစ်ဘဲရှိသေတယ်
Windows ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ......
ဘယ် Windows များ တင်ထားတာလဲ .........
Vista တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် ...........
Window ကို Hard diskအဟောင်းမှာ တင်တင် ..အသစ်မှာတင်တင်..Hard Disk မပျက်သေးသရွေ့ Windowက ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်.... များသောအားဖြင့် Hard Disk ၂ခု တပ်ခြင်းဟာ စက်ကိုလေးစေတတ်ပါတယ်.:106:..Hard Disk ၁ခုတည်းနဲ့ ပြန်စမ်းကြည့်ပါ ...သိသာပါလိမ့်မယ်....Graphic Card နဲ့တော့ သိပ်ဆိုင်မယ်မထင်ပါ...
ှစက်လေးတာက software ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလို Hardware ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Windows Start Up မှာ မလိုအပ်တဲ့ software တွေ Load လုပ်နေရင်လည်း Memory Waste ဖြစ်နိုင်တယ်။ Norton တို့လို Antivirus Program တွေ Install လုပ်ထား ရင် လည်း လေးတတ် တယ်။
Hardware အနေနှင့်ကတော့ Hard Disk ကြောင့်လည်းလေးတတ် တယ်။
Memory ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ရင်လည်း လေးနေတတ် တယ်။
VGA ကြောင့်တော့လေးတာ သိပ်မရှိဘူး။
Windows သုံးရတာ နှေးတဲ့ ပြသနာက တော်တော်များ ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်....
ကျွန်တော် လက်ရှိဆက်တင်လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့ "Windows ရဲ့ Performance ကိုမြှင့်သုံးတဲ့ နည်း" လေး ပြောပြပါ့မယ်..
(၁) Windows မှာ သိပ်မလိုအပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လျှော့ချပါ....
Start-> Control Panel -> ထဲမှ System ကိုဖွင့်ပါ၊
System Properties -> Advanced Tag-> Performance ရဲ့ Setting ထဲကို၀င်ပါ၊
Performance options--> Visual Effets --> Customs ကိုရွေး ပြီး
အောက်ဆုံး Effects (၃) ခု ကိုပဲ အမှတ်ခြစ််ပြီး ကျန်တာတွေကို Blank ထားပါ။
ပြီးရင် Apply --> OK နှိပ်ပါ။
(၂) Paging Files တွေ အတွက် Virtual Memory ကိုမြှင့်သုံးဖို ့
အထက်ပါအဆင့်အတိုင်းပြန်သွားပြီး Performance Options-->Advanced ထဲကို၀င်ပါ၊
အကန် ့သုံးခုရဲ့ အောက်ဆုံးအကန် ့Virtual Memory မှာ Change ကိုနှိပ်ပါ၊
Virtual Memory ထဲမှာ လက်ရှိ ၀င်းဒိုး တင်သုံးထားတဲ့ ဟာ(ဒ်)ဒစ် ကိုရွေးပြီးဖြစ်နေမယ်၊
Space Available နှင့် အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Recommended ပမာဏ အတိုင်း
Initial Size(MB) နှင့် Maximum Size (MB) နေရာတွေမှာ ပြောင်းထည့်ပါ၊
ပြီးရင် Set--> OK ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်ပါ။
(၃) Windows အတက်မြန်ဖို့မလိုအပ်တဲ့ Services တွေနဲ့Start Up ပရိုဂရမ်တွေကိုကိုဖြုတ်ချထားဖို ့.
Start-->Run ဘောက်(စ်) ထဲမှာ msconfig လို ့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ၊
(က)System Configuration Utility ရဲ့ Services ကို ၀င်ပြီး အရင်ဆုံး Hide All Microsoft Services ကိုအမှတ်ခြစ်ပါ၊(Windows ဟာ Microsoft Services တွေနဲ ့တိုက်ရိုက်ပက်သက်နေလို့မှားမဖြုတ်မိအောင်)
ပြီးရင် အထဲမှာ မလိုအပ်ဘူး ထင်တဲ့ Services တွေကို Blank(uncheck)လုပ်ပါ၊
(ခ) System Configuration Utility ရဲ့ Startup ကို ၀င်ပြီး စက်စဖွင့်ဖွင့် ခြင်းရှိသမျှ Run နေတဲ့ Program
တွေကို Blank (uncheck) လုပ်ပါ၊ (windows တက်ပြီးရင်မှ အသုံးလိုမှ ဖွင့်သုံးတာ ကောင်းပါတယ်)။
(ဥပမာ- skype, Gtalk တို ့လို ပရိုဂရမ်တွေ သုံးချင်တဲ့အချိန်မှ ဖွင့် သုံးတာကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ကောင်းတာက ဘာမှန်ညာမှန် မသိဘဲ စက်ဖွင့်တာနဲ့လှုပ်ရှားသောင်းကျန်တဲ့ Spyware
တွေ Trojans တွေ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သလို ဘယ်လိုမှ Uninstall (ဖြုတ်ချလို ့) မရတဲ့ Spyware
programs တွေ ကိုချုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ပြီး မှ programs files ထဲ ကနေ Folder တစ်ခုလုံး Delete
အားလုံးပြီးရင် Apply--> Ok နှိပ်ပြီး Restart လုပ်ပါ။
Windows ပြန်တက်လာလို့Message ပေါ်လာရင် Don't Show Me Again လုပ်ပြီး OK နှိပ်ပါ။
(၄) ပြန် ့ကြဲနေတဲ့ ဖိုင်အပိုင်းအစ တွေကိုပြန်စုစည်ဖို့Disk Defragment လုပ်ပါ၊
My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး-->Manage ထဲကို၀င်ပါ၊
Storage-->Disk Defragment ကိုနှိပ်ပြီး ညာဘက်ခြမ်းထဲက HDD တွေကို တစ်ခုခြင်း
ရွေးပြီး အောက် မှ Analyze အရင်လုပ် ပြီး Disk Defragment လုပ်ပါ၊
(၅) Internet ကိုအသုံးပြုတဲ့ Computer Userတွေ Internet Explorer, Firefox စတဲ့ Web Browser တွေရဲ့
Temporary Files တွေကိုရှင်းဖို ့မေ့နေတတ်ကြတယ်။
Internet Explorer ကိုရှင်းဖို ့
Start-->Control Pannel--> Internet Options ကိုသွားပါ၊
General ထဲမှ Temporary Internet Files မှ Delete Cookies Delete, Delete Files လုပ်ပါ၊
ပြီးရင်ဘေးက Setting ထဲကို၀င်ပြီး Amount of Disk space to use ကို 25 MB လောက်ပဲထားပါ၊
OK နှိပ်ပြီး Internet Options ရဲ ့နောက်ဆုံး Tag ဖြစ်တဲ့ Advanced ကိုသွားပါ၊ Steeings အောက်ထဲက
Security နေရာ မှာ Empety Temporary Internet Files Folder when Internet Browser is closed ကို
ရှာပြီး အမှတ်ခြစ်ပါ။(Internet Browser ကိုပိတ်ပြီးတာနဲ့Temporary Files တွေကိုဖျက်ပြီးဖြစ်အောင်လို ့ပါ)
ပြီးရင် Apply--> OK နှိပ်ပါ။
Firefox အတွက် ကတော့ Tools ရဲ ့အောက်မှ Clear Private Data လုပ်ရင် ရပါပြီ။
အဲဒီ အချက် (၅) ချက်လောက် လုပ်ရင် စက်ရဲ့Performance ဟာ အလွန်ကောင်းတဲ့အနေအထား ဖြစ်သွားပြီး
ကျွန်တော် ပြောပြတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ အမှားအယွင်း ရှိရင် ထောက်ပြေ၀ဖန်ပေးပါ ခင်ဗျာ.....
ကျွန်တော်ပြနာ ကို၀ုိင်စဉ်စားေးပးတဲအတွက် ကျွန်တော်အရမ်းဘဲ ပျော်ရွှင်မိတယ် ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာအခုတော့မြန် သွားပါပြီး VGA card နဲ on board VGA တိုက်နေတော့စက်ကလေးသွားတာပါ ကျွန်တော်on board VGA ကို ပိတ်
ကျွန်တော်စက်က refresh လုပ်ဖို့right click နိပ်လိုက်တာတော်တော်စောင့်ရတယ် cpu 2.4, memory 1 , hardisk 140 တောင်ရှိ တာဘယ်လိုကြောင့်နှေးနေမှန်းကိုမသိဘူးကူညီကြဘာအုန်:77 :
Please open the Task Manager and look the CPU performance.If CPU performance is increase (let say 90 or 100%) your computer is probably (I think most probably) attacked by malwares (the most common are Trojan Horse, back door ). :106:
1. Try Anti-spyware like spyware doctor . click on the link to download!
2. Clean the window registry by registry cleaner ( I used CCleaner )
3. Defrag the hard disk regularly.
And the last and the most effective method is here---:6:
HEY isn'tagood idea,huh?:)):)):)):))